Nhau - Samsung Display iri kugadzirira kuwedzera yavo diki uye yepakati-saizi OLED mapaneru ekugadzira huwandu muSouth Korea
Samsung Display iri kugadzirira kuwedzera yavo diki uye yepakati-saizi OLED mapaneru ekugadzira simba muSouth Korea
Beijing nguva munaNovember 25th, China Bata Screen Nhau, Samsung inoronga kuwedzera huwandu hwekugadzira hweOLED mapaneru, chizvarwa chinotevera chekuchinjika. OLED masikirini anogona kukotama 200,000 nguva. Zvinoenderana nemishumo yenhau dzekunze, Samsung Display, ine mukana wakajeka mumunda wemadiki uye epakati-saizi OLED mapaneru anodiwa kune akangwara mafoni, yave kutogadzirira kuwedzera yavo OLED mapaneru ekugadzira pani muSouth Korea.
Zvinoenderana nemishumo kubva kune vekunze vezvenhau, Samsung Display inoronga kuwedzera yayo OLED mapaneru ekugadzira kugona kwekugadzira QD-OLED mapaneru eTV uye OLED mapaneru ezvimwe zvigadzirwa zveIT.
Nhepfenyuro dzezvekune dzimwe nyika dzinoratidzawo kuti Samsung Display iri kuvandudza kugona kwekugadzira kweOLED mapaneru nekushandura mamwe mafekitori eLCD mapaneru kuita OLED mapaneru mafekitori.
Samsung Display yafunga kubvisa kubva kuTV LCD mapaneru musika uye zvishoma nezvishoma kusiya kugadzira. Vezvenhau vekune dzimwe nyika vakataurawo mumushumo kuti vakatsiva midziyo paLCD TV panel yekugadzira mutsara weL7-2 fekitori neiyo 6th chizvarwa OLED mapaneru ekugadzira mapaneru kuti agadzire madiki uye epakati nepakati OLED mapaneru. Chikamu chemidziyo pane yakakura-saizi yeLCD pani yekugadzira mutsara weL8-1 fekitori yakabviswa zvakare, uye nzvimbo yemahara inoshandiswa kuisa QD-OLED TV pani yekugadzira mutsara.
Mumushumo, vezvenhau vekunze vakataura kuti QD-OLED TV mapaneru ekugadzira mutsara weL8-1 fekitori ine huwandu hwepamwedzi hwe30,000 girazi substrates, zvinoreva kuti inogona kugadzira 1 miriyoni 55-inch uye 65-inch QD-OLED TV. mapaneru gore negore. .
Sezvo fekitori yeL8-1 ichine nzvimbo mushure mekuisa QD-OLED TV panel yekugadzira mutsara, midhiya yekunze inotarisira kuti Samsung Display inogona kuramba ichiishandisa kuwedzera huwandu hwekugadzira kweQD-OLED TV mapaneru, kana kuisa 8.5-chizvarwa OLED. mutsara wekugadzira panel.
Uye zvakare, semutungamiri mune madiki-saizi OLED skrini, Samsung yakatoburitsa ruzivo rwechizvarwa chinotevera cheanochinjika OLED skrini. Zviripachena, izvi zviri kugadzirira muchina mutsva unotevera.
Kubva pane izvo zveSamsung zviri pamutemo kuratidza, iyo nyowani inoshanduka OLED skrini yakavandudza zvakanyanya hupenyu hwayo hwekupeta. Mukushandiswa kwakajairwa, vashandisi vanogona kukotama ka200,000 pasina kukuvara, chero bedzi iwe uchiishandisa zvakajairika, makore mashanu akawandisa.
Uye zvakare, kuitira kuti skrini iratidzike zvirinani, panguva ino iyo skrini nyowani yakafukidzwa neUTG yekupedzisira-yakaonda girazi kuti ienzanise kupeta (kusimba) uye kuratidza mhedzisiro.
Kana zviri zvekupetuka kwechidzitiro, iwo mameseji akaburitswa neSamsung anoratidza kuti kupeta radius ye1.4R (1.4mm) inogona kuwanikwa. Izvi zvine mukana wekudzikisa kuoma kwe hinge dhizaini uye kuderedza mitengo ukuwo uchidzikisa kupeta kupeta.
Nguva yekutumira: Nov-29-2021